Fa maninona no tsy eo amin'ny fiaraha-monina ny varotrao? | Martech Zone
Fa maninona no tsy eo amin'ny fiaraha-monina ny varotrao?
Alatsinainy Oktobra 29, 2012 Alatsinainy Oktobra 29, 2012 Douglas Karr
Tamin'ny fihaonambe vao tsy ela akory izay dia nahita ny iray amin'ireo mpanjifanay nahay tamina tambajotra mahay sy miasa ny efitrano. Izy ireo dia nanao asa mahafinaritra ary nahazo fitarihana tsara na dia teo aza ny lisitry ny mpanatrika mafana tao amin'ny kaonferansa. Rehefa niresaka tamin'izy ireo i Marty, dia tsikariny fa tsy manana fampahalalana ara-tsosialy izy ireo hifandraisany amin'ireo mpivarotra an-tserasera. Taorian'ny fiverenany dia nosoratany ny orinasa hampahafantatra azy ireo ary manao ny marina izy ireo ary nilaza fa tsy marina ny ekipan'izy ireo izany sosialy.
Mila misangy amiko ianao.
Na dia mety ho toa raharaha aza ny LinkedIn, dia mety ho toa an'ny ankizy any amin'ny oniversite ny Facebook ary na dia ilay teny aza nibitsika mety ho toa mampihomehy, ireo no fihaonambe an-tserasera lehibe indrindra izay hitanao. Misy an'arivony tapitrisa olona an-tserasera an-jatony mitady ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny andro iray, manontany momba ny orinasanao, ary vonona hirotsaka an-tserasera Bebe kokoa noho izy ireo tsy mandeha amin'ny Internet.
Ireo vondrona indostrialy ao amin'ny LinkedIn, ireo pejy indostrialy ao amin'ny Facebook, Tweetups, ireo seho Twitter mivantana ary ireo tenifototra ao amin'ny Twitter dia manolotra fotoana tsy mampino ho an'ny ekipan'ny varotrao hampita tambajotra, hananganana fitokisana ary hahita vinavina amin'ny Internet. Maninona eto amin'izao tontolo izao no handanianao dolara an'arivony hanamboarana trano rantsan-kazo sy handefasanao ny ekipa fivarotanao ho amin'ny fihaonambe… fa tsy raharahianao ny media sosialy? Voanjo tsotra fotsiny izany ankehitriny. Voanjo.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy hampiakarana ny ekipan'ny varotrao ao amin'ny Twitter:
Manana politika ara-tsosialy apetraka ary alao antoka fa fantatry ny solontenan'ny varotrao hoe iza ary iza no avela ary tsy avela hiresaka momba ny Internet izy ireo.
Fenoy tanteraka ny mombamomba anao ary asio sary tena izy. Azonao atao mihitsy aza ny mangataka amin'ny orinasanao hanana pejy fipetrahana manokana ho an'ny solontenan'ny varotrao!
Mitady vondrona indostria ao amin'ny LinkedIn. Miaraha amin'ireo vondrona misy mpikambana marobe izay manana hetsika maro. Ampio lanjany ny resaka.
Aza mivarotra! Tsy hanatona olona iray amin'ny fihaonambe ianao ary hanolotra azy ireo fitsarana 14 andro… aza atao amin'ny media sosialy izany. Mila manome lanja ianao ary manangana fifandraisana amin'ny tamba-jotra ivelan'ny Internet hanakatonana ny orinasa ary tsy misy hafa amin'ny Internet.
Halaviro ny fifanolanana. Fivavahana, politika, vazivazy mampiahiahy - izany rehetra izany dia mety hahatonga anao hanana olana any amin'ny birao ary mety hahatonga anao hanana olana amin'ny Internet. Ary maharitra ny Internet!
aza badmouth ny fifaninanana. Tsy misy dikany izany ary handany vola anao. Mety hahamenatra anao aza izany satria ny mpanjifan'izy ireo faly sy ny mpanjifany dia tonga hamonjy azy ireo ary manomboka miovaova aminao.
Omeo fanohanana. Tsy ampy ny mampita ny olona amin'ny pejin'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao. Ny fandraisana andraikitra manokana hiantohana ny olana iray dia voalamina tsara ary ny fitazonana ny mpanjifa sambatra dia hanome ny tambajotra fiheverana lehibe momba anao sy ny fiheveranao ny mpanjifanao.
Aza manao fotsiny mifandray fanantenana. Araho ny fifaninananao hahafahanao mianatra bebe kokoa momba azy ireo, ny paikadin'izy ireo ary ny fiarahamonin'izy ireo. Araho ny mpitarika ao amin'ny indostria mety hanampy anao hampahafantatra anao ny tambajotrao. Araho ny mpanjifanao ary hampiroborobo ny asany. Araho ny fanantenana mba hahafantaranao azy ireo.
Raha ny paikadinao varotra dia ny miandry fitarihana miditra, miantso amin'ny alàlan'ny lisitry ny firaka, ary miandry ny fihaonambe manaraka hanangonana karatra fandraharahana, dia farananao ferana ny fahafahanao mivarotra amin'izay misy ny fangatahana. Ny fangatahana ny vokatrao sy ny serivisinao dia an-tserasera izao. Ny resaka dia mitranga miaraka aminao na tsy misy anao… na ratsy kokoa - amin'ireo mpifaninana aminao. Tokony ho tao anatin'ireo resaka ireo ianao. Tokony hahazo ireo varotra ireo ianao.
Tags: taratrafmLeadsFanamafisana ny varotrahaino aman-jery sosialyfifaneraserana